SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: အနှစ် (၂၀)မှာ ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ?
အနှစ် (၂၀)မှာ ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ?
(NCGUB, NCUB နှင့် MPU)
" ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဆိုတာ သူတို့ ပြောတာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လေ့ ရှိကြတယ်။ အပြော တခြား အလုပ် တခြား မဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်တွေကို အရင်က သီးခြား လူတန်းစားလို့သဘောထားခဲ့ကြတယ်။ အခု ခေတ် မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ Leaders as Members ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့တသားတည်း ကျခဲ့ကြပြီ။ ခေါင်းဆောင်မှုဟာ သီးခြား ဖြစ်ခဲ့ရင် အာဏာရှင်ဆန်သွား တတ်တယ်။ ပြီးတော့ Leader တွေဟာ Responsibility ဆိုတဲ့ တာဝန် ယူမှု၊ Accountability ဆိုတဲ့ တာဝန်ခံမှုတွေကို မငြင်းဆန်ရဘူး။ " *
" Power is not Power over others."
" Power is Ability to get things done"
ပါဝါ ဆိုတာ အခြားလူတွေကို အတင်းအကြပ်စေခိုင်းမှု၊ လွှမ်းမိုးမှု မဟုတ်ဘူး။ "အလုပ်တွေဖြစ်အောင်" လုပ်နိုင် တဲ့ စွမ်းရည်တခုပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အလုပ်သိပ်ကြီးလာရင် Leader က နေရာတကာ လိုက်လုပ်လို့မရ တော့ဘူး။ Power to empowerment ဆိုတဲ့ " လုပ်ပိုင်ခွင့်" ကို ပေးရလေ့ရှိတယ်။ အဆင့်ဆင့် တာဝန်အလိုက် တာဝန်ယူ ခွဲဝေ လုပ်ဆောင် မှုပေါ့။ တဖက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးတာဟာ Empower လုပ်တာပဲ။ **
ဒါတွေကတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု ။ ကဲ MPU က တာဝန်ခံမှု တွေကကော။
ဒီနေ့ MPU သည် လွှတ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ စာကြောင်းနှင့် ပတ်သက်လို့ရှိရင် ဘာကြောင့် MPU က အဲသည်လို ကြွေးကြော် နေရတာလဲ။ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု စတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ အတွက် ကြွေးကြော် နေရတာပါ။ လွှတ်တော် တရပ်ရဲ့တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု မရှိတဲ့ အကြောင်းကြောင့် ရှေ့ လာမယ့် အနာဂတ် အတွက် မျိုးစေ့ချ လုပ်ဆောင်သွားစေချင်တဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို တောင်းဆိုချက် တရပ်အဖြစ် ကြွေးကြော်နေတာပဲ ဖြစ်တယ်။
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်တရပ်အဖြစ် MPU ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှု
အမျုိးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံရေး NGO အနေအထားဖြင့် လှုပ်ရှားခြင်းထက် လူ့ အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေး ကြိုးပမ်း နေကြသော လှုပ်ရှားမှုကြီး တခုလုံးနှင့် (Formality ) ဆက်စပ်ရန် လိုအပ်လာပြီ။ ထိုသို့ဆက်စပ်ရန် အဖြစ်သင့် ဆုံးသော အဖွဲ့ အစည်း အဆောက်အအုံ (Institution ) မှာ လွှတ်တော် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသား ညီညွတ် ရေး လွှတ်တော်ဟု ဖွဲ့ စည်း ဖော်ဆောင်သွားရန် MPU က ကြိုးပမ်း ထားရပါမည်။
(၁) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လွှတ်တော်တိုင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့ ကို ကြီးကြပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်သကဲ့သို့အစိုးရ အဖွဲ့အားကောင်းလည်ပတ်အောင် ပံ့ပိုးသည့် တာဝန်ယူရသည်။ အမျုိးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်သည် ယင်းတာဝန်ကို ယူရန်ဖြစ်သည်။
(၂) အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်တည်ရှိခြင်း၊ NCGUB အစိုးရနှင့် နည်းလမ်းတကျ ဆက်စပ်ထားခြင်း၊ NCGUB အဖွဲ့ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်မှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ၊ တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်း တို့ ကို နည်းလမ်း တကျ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရမည်။
(၃) လူ့ အခွင့်အရေး ၊ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြသော အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီးသာမက ပြည်တွင်း လူထု၏ ထောက်ခံမှု ပိုမို တိုးတက် ရရှိနိုင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ စသည်တို့ ၏ အသိအမှတ်ပြု ခံရမှု အလားအလာ များစွာ တိုးတက် လာနိုင်သည်။
တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိမှု တို့ သည် ကောင်းမွန်သော လွှမ်းမိုး အုပ်ချုပ်မှု များနှင့် သက်ဆိုင်သည်၊။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့် ကျင်နေခိုက် မိမိတို့ အတွင်း တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု၊ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရှိမှု အခြေခံများဖြင့် ကောင်းမွန်သော လွှမ်းမိုး အုပ်ချုပ်မှု (Good government ) မျိုး စေ့များကို ချမှတ် သွားလိုသည်။ ယင်းတို့ ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်မှာ လက်ရှိပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ ဖြစ်စေ ၊ နောင်တွင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြင့် တိုးချဲ့ ဖွဲ့ စည်းရန် မျှော်မှန်းထားသော အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရဖြစ်စေ၊ ဒီမိုကရေစီ ရရှိပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရအားလုံးနှင့် ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သည်။ အစိုးရမှန်သမျှသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံတွင် တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန် ယူမှု၊ ရှင်းရှင်း လင်းလင်းရှိမှု ၊ ကောင်းမွန်သော လွှမ်းမို အုပ်ချုပ်မှု များကို ဖော်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်မှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသို့့-
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်အုပ်စု၊ စစ်အစိုးရ အပေါ် တိုက်ပွဲဝင်နေ ရခြင်းမှာ ထိုအစိုးရသည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို လုံးလုံးငြင်းပယ်ကာ အထက်ဖော်ပြပါ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု ကောင်းမွန်သော လွှမ်းမိုး အုပ်ချုပ်မှုတို့ ကို ဥပက္ခာ ပြုထားသည်။ လူထုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် နည်းလမ်းတကျ ဖွဲ့ စည်းထားသော လွှတ်တော်မရှိ ၊ လွှတ်တော်၏ ခန့် ခွဲ ရာထားပေးမှု မရှိဘဲ တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို ထင်သလို စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲ ကိုယ်ကျိုး ရှာနေကြသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ မူဝါဒ ရေးရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူထု၏ သဘော ဆန္ဒများ လေးစားစွာ ရယူခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းမရှိ ၊ ထင်သလို ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် တော်လှန်ရေး အင်အားစုများအတွင်း လိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့ စည်း ပေါ်ထွန်း လာရသော အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ အဖွဲ့ သည်လည်းကောင်း၊ နောင် ပေါ်ပေါက် မည့် အမျုိးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသည် လည်းကောင်း၊ နအဖ အစိုးရ ကဲ့သို့မဖြစ်အောင် သတိပြု ရှောင်ကျဉ် လုပ်ဆောင် ကြဖို့လိုအပ်လာပြီ။ သို့ ဖြစ်၍ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော် အနေဖြင့် ဖွဲ့ စည်း တည်ထောင် လှုပ်ရှား သွားလျှင် တကယ်လက်တွေ့စောင့်ကြည့် ရန် လွှတ်တော်က ကြီးကြပ်နိုင်မည်၊ အားပေး ပံ့ပိုးမှုများလည်း လုပ်ဆောင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသို့
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရသည် NCGUB အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရမှ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အခြားသင့်တော်သော စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကာကွယ်ရေး ပါရဂူများဖြင့် တိုး ချဲ့ဖွဲ့ စည်းထားသော Good government ဖြစ်သော အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုထားသော အစိုးရဖြစ်သည်။
NCGUB ကို ဘယ်လိုပြုပြင် ပြောင်းလဲ တိုးချဲ့ မလဲ?
(က) တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ
(ခ) သင့်တော်သော ပါရဂူများ၊ စီးပွားရေး ပါရဂူ၊ ကာကွယ်ရေးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေး ဌာန၊ စသည်ဖြင့် တိုးချဲ့ ရန် မူအားဖြင့် ၂၀၀၈ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ လက ကျင်းပသော MPU ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
(က) တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင် တိုးချဲ့ ခြင်း
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ က NCGUB ကို စတင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့စဉ်က တိုင်းရင်းသား ခေါင်း ဆောင်များဖြင့် လာမည့် နောင် အနာဂတ်တွင် NCGUB ကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့ စည်းမည်ဟူသော ကတိက၀တ်များ ရှိခဲ့ကြသည်။ အဲဒီ ကတိက၀တ်များကို မမေ့သင့်၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကလည်း NCGUB ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပြီ။
(က) တိုင်းရင်းသားများ အပါအ၀င် ပြည်သူ တရပ်လုံးနဲ့ကင်းကွာနေတယ်။
(ခ) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စု အချုပ်အခြာ အာဏာကို ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်း နေပြီ။
(ဂ) အခြေခံ မတည်ပေးခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစုများ၊ အင်အားစုများနဲ့ လည်း ပိုမိုကင်းကွာနေပြီ။
(ဃ) ရဲ့ ဝံ့ပြတ်သားတဲ့ တိကျတဲ့ ဦးဆောင်မှု အားနည်းနေတယ်။
(င) စင်ပြိုင်အစိုးရ တရပ်ရဲ့ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ချို့ တဲ့နေတယ်။
(စ) နအဖ ရဲ့ လမ်းပြ မြေပုံ အပါအ၀င် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ချေဖျက် ဆန့် ကျင်သွားရန် ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ တိကျ စွာ ပြဌာန်းထားမှု မရှိ သေးတာ။
အဲဒါတွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်သွားခဲ့ ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီ (၁၉) MPU ညီလာခံကြီးမှာ - (က)"အမျိုးသားရေး" လုပ်ငန်း (National cause ) တရပ်ဖြစ်သည့်
အတွက် NCGUB အနေနဲ့အလေးအနက်ထား၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
(ခ) စတင် ဖွဲ့ စည်းစဉ်က ရရှိခဲ့သော တပ်ပေါင်းစု အခြေခံများ အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံခြင်းကို ဆက်လက် ရရှိ စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်သည်။
(ဂ) မိမိ ကိုယ်ကိုယ် တရားဝင် ဖြစ်စေလျက် ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ အပါအ၀င် ပြည်သူ လူထု တရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန် ကြိုး ပမ်းသင့်သည်။
(ဃ) ရဲ့ ဝံ့ခိုင်မာသည့် ဦးဆောင်မှုဖြင့် တိုက်ပွဲဝင် အစိုးရတရပ် အဆင့်သို့တက်လှမ်းသင့်သည်။
(င) အထက်ပါ ၄ချက်ကို ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာလျှင်သော်၎င်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒမရှိလျှင် သော်၎င်း၊ လက်ရှိ (ကက်ဘိနက်) ဖျက်သိမ်းသင့်သည်။ … … လို့ လည်း ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။
NLD(L.A) ၏ သဘောထား
NLD(L.A) ကမိမိ၏ သဘောထားကို ပြည်တွင်းရှိ အဖွဲ့ ချုပ်ခေါင်းဆောင်များမှ ရယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မိမိတို့ အနေဖြင့် MPU မှ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂတွင် နအဖ အစိုးရ၏ တည်ရှိမှုကို စိန်ခေါ်သည့် လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံရေး အရ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။ ယခု ကျင်းပသော MPU ညီလာခံကို အရေးကြီး အစည်းအဝေး တခုအဖြစ် မြင်သည်။
စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ် ထူထောင်၍ ၄င်း၏ ပေါ်လစီများကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရန် မူလက NCUBသည် လွှတ်တော်တရပ်အသွင် ရှိကြောင်း ၊ တချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားများဖြင့် တိုးချဲ့ ရန် မူအားဖြင့် သဘောတူ ထားခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် MPU သည် NCGUB ကိုတာဝန်ခံ၍ အစိုးရအဖွဲ့ ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သောကြောင့် MPU သည် လွှတ်တော် တရပ်အသွင် ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ NCGUB ၏ မူလ သဘောထား ရပ်တည်ချက်များ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာ၍ တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောထား အမြင်နှင့် တဖြည်းဖြည်း ကင်းကွာ လာသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ယင်း အခြေအနေကို ပြန်လည်ကုစားရန် NCGUB ၏ ပေါ်လစီ ဆိုင်ရာများကို လွှတ်တော်အသွင်ဆောင်နေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားသော MPU ဖြင့် ထ်ိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ ခံစားချက် ရပ်တည်ချက်များ အလေးအနက်ထား၍ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အားကောင်းသော အစိုးရ တရပ် ဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ထို့ အတူ ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ စွန့် လွှတ် အနစ်အနာခံမှု တန်ဖိုးများကို အလေးအနက် ထားသင့်သည်။ ပြည်တွင်းရှိ NLD အဖွဲ့ ချုပ်၏ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အလေးအနက်ပြု ဆောင်ရွက်၍ နိုင်ငံတကာသို့ထိုးဖောက်ရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ MPU သည် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် တရပ်ဖြစ်ကြောင်း NLD (L.A) မှ သဘောထား ပေးခဲ့သည်။
NCUB က NCGUB ကို ဘယ်လိုဝေဖန်သလဲ?
(၁) ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် တသွေး တသံ တမိန့်ပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် အကြွင်းမဲ့ ညီညွတ်ရေး ဟူသည် မရှိနိုင်ပါ။
(၂) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရသည် လူတစုက မိမိ တို့ ဘာသာ စုစည်း ပျိုး ထောင်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာသည့် အဖွဲ့ အစည်း မဟုတ်။ ၁၉၈၉- ၉၀ ခုနှစ်များ က အင်အားကြီးမားခဲ့သော မြန်မာပြည် ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် အဖွဲ့ ချုပ်ကြီး အနေဖြင့် စင်ပြိုင် အစိုးရ အဖြစ် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဖော်ဆောင်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ် တရပ်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ချမှတ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကို ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသား တို့ ၏ လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ရောက်ရှိလာစဉ် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့၍ အကောင် အထည် ဖော်စေခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရသည် လူတစု (သို့ မဟုတ်) ယင်းအစိုးရ အဖွဲ့ တွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အချို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း မဟုတ်ချေ။
တချိန်တည်းတွင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်းအစိုးရဟူသော အမည်တလုံးကို နိုင်ငံတကာတွင် အခက်အခဲကြားမှ စွမ်းဆောင် အားထုတ်ခဲ့သော သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့ သော် ထိုအစိုးရ အမည်ကို ကိုင်စွဲကာ လူတခုခန့် မျှဖြင့် ဘဏ္ဍငွေကြေးများကို ၄င်း၊ မူဝါဒ ရေးရာများကို ၄င်း၊ မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၄င်း၊ စီမံ ခန့် ခွဲ လုပ်ဆောင်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်လျှင် မသင့်တော်ချေ။ မဖြစ်သင့်ပေ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးနှင့် ယင်းကို မွေးဖွားပေး လိုက်သည့် နိုင်ငံရေး တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ အစည်းကြီးများကို တာဝန်ခံရန် လိုအပ်သော အစိုးရ ဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံမှုကို လက်တွေ့ ပြသရန်လည်း အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်ဟု MPU ကို သတ်မှတ်ပြီး ဖွဲ့ စည်းဖော်ဆောင်သွားရန် MPU က ကြိုး ပမ်းသွားရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသား ညီညွတ်ရေး လွှတ်တော်မှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသို့ဦးတည်ဖွဲ့ စည်း သွားရန် ယနေ့ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အညွန်း။ ။ * + **နေဇင်လတ်၏ ၀မ်းသာဖြစ်ရတယ် ဆောင်းပါးမှ အချက်အလက်များ၊ ကိုးကား ဖော်ပြ ထား ပါ သည်။ ( ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ ရွှေ အမြုတေ)
Kachin party - but not KIO - to contest 2010 elect...